how to get zawgyi keyboard on XFCE desktop – box02's little blog
September 24, 2009 by box02
GNOME desktop ပော်မှာ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်သွင်းပြီးလို့ အဂဿဿငလိပ်မြန်မာ ကီးဘုတ်ပြောင်းဖို့အတွက်လည်း keyboard indicator ဆိုတဲ့ပရိုဂရမ်လေးရှိနေတာကြောင့် ဇော်ဂျီမြန်မာဖွန့် ရိုက်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် XFCE လို့ခော်တဲ့ desktop ပော်မှာတော့ Keyboard Indicator တို့လို ပရိုဂရမ်မရှိတာကြောင့် စတင်အသုံးပြုသူ beginners များအဖို့ ဇော်ဂျီမြန်မာကီးဘုတ်အသုံးပြုဖို့အတွက် ပြသဿသနာတက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စတင်အသုံးပြုသူများ desktop ရွေးချယ်အသုံးပြုရာမှာ စိုးရိမ်လေ့ရှိတဲ့ မြန်မာဖွန့်သုံးလို့ရပါ့မလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုမျိုး ကင်းဝေးရအောင် ဒီပို့စ်လေး ရေးလိုက်ပါတယ်။ XFCE desktop က အများသိကြအတိုင်းပဲ အရမ်းပေါ့ပါး မြန်ဆန်ပြီး လှပတဲ့ desktop program ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အပော်မှာ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်သွင်းချင်ရင်လဲ အလွယ်လေးပါ။ zawgyi-keyboard google code project ကနေ ခုလက်ရှိနောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့ zawgyi-keyboard-0.3.2.tar.gz ကို download လုပ်ချပြီး install guide အတိုင်း install လုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် xorg.conf ဖိုင်မှာ myanmar keyboard [mm] ကိုထည့်ပေးပါ။ ထည့်ပုံက နှစ်သက်ရာ text editor တစ်ခုခုဖြင့် /etc/X11/xorg.conf ဖိုင်ကို အောက်ကအတိုင်း InputDevice Session မှာ ပြင်ပေးပါ။
ပြင်ပြီး save လုပ်ပြီး ဖိုင်ကို သိမ်းလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ရမှာ shell program file တစ်ခုပါ။ fixkeyboard လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါ(အမှန်တော့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အမည်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ကိစဿစမရှိပါ)။ အဲဒီဖိုင်ကို /usr/bin အောက်မှာ save ပြီး သိမ်းပေးပါ။
$ sudo mousepad /usr/bin/fixkeyboard
setxkbmap -option grp:switch,grp:alt_shift_toggle us,mm
ပြီးရင် save ပြီး သိမ်းလိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ switcher key toggle အတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ options ထားနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ တခြား switch options တွေပါ။
စတာတွေကို ကြိုက်ရာ အစားသွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် အောက်က command line လေးကိုလဲ run ပေးလိုက်ပါ။
$ sudo chmod +x /usr/bin/fixkeyboard
နောက်ပြီး logout မလုပ်ခင် Autostarted Applications မှာ အဲဒီ file လေးကို ထည့်ပေးခြင်းအားဖြင့် နောက် login ဝင်တဲ့အချိန်အတိုင်း auto run ပေးမှာပါ။ Autostarted Applications ကို run ဖို့အတွက် Desktop ပော်ကို right-click နှိပ်ပါ။ menu ပော်လာမယ်။ အဲဒီကနေ Settings >> Autostarted Applications ကိုရွေးနှိပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အောက်ကပုံအတိုင်း Autostarted Applications Window ပော်လာမယ်။ ပုံထဲကအတိုင်းပဲ Add ကိုနှိပ်ပေးပြီး တောင်းခံတဲ့ ကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်ပေးပါ။
Add application on Autostarted Applications
Description: Keyboard Switcher
ပြီးရင် OK နှိပ်၊ ပိတ်ပြီး Logout လုပ်ပေးလိုက်ပါက အခြား desktop တွင်အသုံးပြုသလို toggle key switch ပြီး အဂဿငလိပ် ဇော်ဂျီမြန်မာကီးဘုတ်ကို ပြောင်းနိုင်ပါပြီး။ mousepad ကိုဖွင့်ပြီးတော့ ဇော်ဂျီကီးဘုတ် ကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
testing zawgyi font on mousepad
Enjoy with it! 🙂
This entry was posted in Howto | Tips, Linux/Unix and tagged Desktop, Gnome, Howto, Keyboard, Linux, Package, XFCE, Zawgyi. Bookmark the permalink.
← how to download rapidshare files with wget
going to cinema for G-FORCE 3D movie →
2 thoughts on “how to get zawgyi keyboard on XFCE desktop”
black hattitude | October 20, 2009 at 3:09 am
box02 | October 25, 2009 at 8:33 am
Yeah, 🙂 me too, thanks for coming to my blog.